musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Egypt News » Egypt inozivisa seti nyowani ye COVID-19 zvirambidzo
Kuputsa Egypt News • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mutungamiriri weEjipitosta Mostafa Madbouly
Egypt inorambidza kuungana kukuru, kucheka zvitoro nemaawa eresitorendi kunonoka kupararira kwecoronavirus
Cairo hondo dzinomutsa coronavirus
Kuungana kukuru nemakonzati zvakarambidzwa mukati memasvondo maviri
Zvitoro zvese, nzvimbo dzekutengesera, maresitorendi, maresitorendi, mabhaisikopo uye dzimba dzemitambo kuvhara mangwanani
Kutaura pamusangano wevatori venhau nhasi, EgyptMutungamiriri wehurumende, Mostafa Madbouly akati hurumende yenyika yatora danho rakakosha kugadzirisa coronavirus inomuka sezvo zororo reEid al-Fitr rasvika.
Mutungamiriri wehurumende akazivisa kuti seti nyowani yemitemo yeCOBV-19 nezvipingamupinyi zvichaunzwa uye zvicharamba zvichishanda kwemavhiki maviri kudzora kupararira kwecoronavirus mumazuva ekupedzisira eRamadan nemhemberero dzeEid.
"Kubva mangwana, Chivabvu 6 kusvika Chivabvu 21, tichavhara zvitoro zvese, nzvimbo dzekutengesera, maresitorendi, maresitorendi, mabhaisikopo nemitambo yemitambo nenguva dza9 dzemanheru kudzikisa zvakanyanya kuwanda kwevanhu munzvimbo idzi," akadaro Madbouly.
Misangano mikuru nemakonsati zvicharambidzwa panguva iyi, nemabhichi nemapaki akavharwa pakati paMay 12 na16, akadaro Madbouly. Mhemberero dzeEid, dzinozoitwa musi wa12 na13 Chivabvu, gore rino dzinowira pakati penguva yehurumende yemavhiki maviri ekurambidzwa.
"Panguva imwecheteyo, basa rekuendesa kumba rinobvumidzwa ... asi mukati memavhiki maviri anotevera, chero musangano, misangano, zviitiko, kana mhemberero dzehunyanzvi dzicharambidzwa mune chero zvivakwa," akadaro PM.
Sarudzo yehurumende inouya apo COVID-19 inotanga kupararira zvakare muEjipitori, uye pakati pekutya kweimwe yemazuva akakosha kwazvo mukarenda yechiIslam ichiwedzera dambudziko iri.